शंकर लामिछाने | मझेरी डट कम
editor — Sun, 06/19/2016 - 01:39
"म अम्बर हुँ तिमी धर्ती लाखौँ चाहे पनि हाम्रो मिलन कहिले नहोला," एकचोटी यो गीत मेरो कानमा परेको थियो - कैयन वर्ष अघि । र, अपरिचित अनुहार भएको त्यस व्यक्तिका रचना, संगीत र गायन कौशलले मलाई जकड़ीहाले । मेरो आँखामा आकाश र धरतीको मिलनभूमि क्षितिजको एक यस्तो सुन्दर दृश्य मौलायो जसमा सूर्य डुब्दै थियो - यो सिद्ध गर्न मानौ त्यो मिलनरेखा एक महाशुन्य हो ।
अम्बरको फ्यान म त्यसरी बने ।
editor — Sun, 09/21/2014 - 22:22
झोछेँको सडकमा गाँजा तथा हृयासिसको पसलहरूको लाइन छ । जत्ति विदेशी पर्यटक आउँछन् तिनका लागि यो खुलेआम बिक्री ज्यादै आश्‍चर्य लाग्दछ ।
kbs — Sun, 11/07/2010 - 21:22
kbs — Wed, 06/30/2010 - 17:37
एब्स्ट्रयाक्ट चिन्तनः प्याज (निबन्ध संग्रह)
हिजो साँझ बाङ्देलजीलाई नयाँ सडकमा भेटेँ । भन्नुहुन्थ्यो- "शङ्करजी, तपाइँको लेख, त्यो लेख, 'शङ्कर लाभिछाने शङ्कर लामिछानेको दृष्टिमा' पढेँ ।''
"एब्स्ट्रयाक्ट पेन्ट गर्ने त तपाइँको काम ! म कहाँ पेन्टिङतिर जाऊँ अब ।''
kbs — Sat, 10/03/2009 - 19:01
डिसेम्बर ११, १९११ युवराज त्रिभुवनको शिक्षारम्भ भएको आज १४ दिन भयो ।
यसबीच, आचार्य बाजेले निकै मिहिनेत गरी साउँ अक्षरको एक पुस्तक आफ्नै हातले तयार पारेका छन् । कालो, रातो, पहेँलो, हरयिो रंगहरूले फूलबुट्टा काटेर ठूल्ठूला अक्षरमा पहिलो पुस्तक तयार पारिएको छ । युवराज त्यही पढ्छन् ।
kbs — Wed, 08/12/2009 - 16:33
भन्छन् दान गर्नु बिर्सिदिनु, अनि मात्र पुण्य मिल्छ । कुरा कहाँबाट उठ्छ भने, भर्खर एउटी अन्धी आइमाई केटोलाई डोर्‍याउँदै आइरहेकी थिई ।
kbs — Wed, 07/08/2009 - 17:11
शंकर लामिछानेका निबन्ध
kbs — Wed, 04/15/2009 - 18:56
कहानी पठाउनु भनी तपाईँको आदेश पाएँ । तर, आज केही दिनदेखि मनस्थिति बिग्रिरहेको छ । यसको कारण हो, मेरो एक मित्रको चिठी जो मैले अस्ति पाएँ । हामी सँगै पढ्यौँ, सँगै खेल्यौँ । तर राजु हामीभन्दा पहिले पनि भिन्न देखिन्थ्यो । उसको पिताजी दरबारी थिए । तेस्रो बाजी बिहा गरेर जन्मेको राजुले आफ्नो बाल्यावस्था पिताजीको काखमा बिताउन पाएन । आमा उसलाई जन्म दिएको केही समयमा नै परलोक भइन् । र ऊ पालियो पिताको एक साथीकहाँ । परदेशमा । काकाले उसलाई मित्रको हैसियतबाट पाले । र राज जहिले पनि थियो । उसले चाहेको पुग्न गाहारो थिएन - धनको विषयमा । तर प्यार उसले पाएन ।
kbs — Wed, 04/01/2009 - 18:03
kbs — Sat, 01/17/2009 - 20:22
kbs — Fri, 12/19/2008 - 21:01
शङ्कर स्मृति : व्यक्ति-कृति-स्मृति
एक प्रश्‍न गर्ने छस् ।
बजाऊँ भने बाँसुरी आफ्नै मन रुन्छ
जुन बन तिमी
तिमी र ममा फरक
स्रष्टा वार्ता - जयबहादुर घिमिरे
मेची र काली चेपिएको छ रे!
गीतको भाका फेरिएन
लड्न परे गोर्खाली
धनको गरिब भए पनि